Umvelisi oPhambili weBhodi kunye neFektri | IGOJON
Indibaniselwano yesixokelelwano seBhodi yokuhambisa kunye nokujikeleza okujikelezayo kunokuhambisa ngokulula umqulu wephepha kwindawo efunekayo, kwaye inokusebenza okuphezulu, okunciphisa kakhulu uxinzelelo lwabasebenzi kunye nokunyusa ukuguquguquka kwenkqubo yokuhambisa iphepha liphela. Inkqubo yokuhambisa iphepha ekrelekrele ikakhulu inoxanduva lokuhamba kunye nolawulo lwephepha lokuhambisa elifunekayo kumgca wecorrugator.
● Ulwakhiwo: inezinto ezininzi zohlobo lwe-v, uhlobo lokuhanjiswa kwe-sprocket kunye nesakhelo kunye ne-pneumatic ekhohlo nasekunene. I-v-ezimile kwibhodi ebotshiweyo ine-v-ezimile kwipleyiti kunye nokuqengqeleka okuzalayo, i-v-ezimile kwipleyiti ye-angle yi-degrees ezingama-170, ububanzi ngama-250mm;
● Isinciphisi seemoto: 2.2kw;
● Isantya setyathanga leBhodi: ubuninzi be-20m / min, isiguquli samaxesha, sinokubuyiselwa umva;
● Izinto ze-Sprocket: intsimbi engama-45, icinyiwe emva kokucinywa kunye nobushushu;
● Ukuthwala luphawu lwe-FK, kwaye i-rack yenziwe nge-lead-out kunye nebhotolo yolondolozo olulula;
● Ioyile yegiya yeemoto ezilungiselelwe yona yioyile ye-iso vg220;
● Ubuninzi bomthwalo wephepha elinye: iitoni ezi-3;
● Emva kokugqiba isakhelo esisiseko kunye nesakhelo sesakhelo, zonke izixhobo zifakwe ngqo kwindawo leyo. Emva kovavanyo, ipleyiti yokugubungela ilungiswe ngezikhonkwane zentsimbi engenasici kunye nesibiyeli sesakhelo, esilungele ukulungiswa kunye nokugcinwa kwenkonzo;
● Icandelo ngalinye lekhadibhodi yokuqala yokuhambisa ikhonkco inokugcina i-1 okanye 2 ii-pcs zephepha phantsi kweemeko ezimileyo. Ngokomqondiso ovela kumgca wecandelo leCorrugated, iphepha loqobo likhatywa ngokuzenzekelayo, eluncedo ekuphuculeni isantya sesithuthi;
● Ukunciphisa ukulahleka kwephepha kunye nokunciphisa iindleko zokusebenza;
● Qaphela ukusebenza okuzenzekelayo okungagunyaziswanga.
Egqithileyo Inkqubo yokuThuthwa kwePhepha ngokuzenzekelayo
Okulandelayo: Jikelezisa ukuhambisa
Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Ibhanki ye-Erp, Inqwelo yokuhambisa, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Ifolda yephepha le-A3,